Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu useqalile kakade umsebenzi Wakhe omusha. Kungani abantu abangakwazi ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu omusha futhi behlala ebandleni leNkathi Yomusa bengeke bakwazi ukuthola insindiso? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Ukwahlukanisa Phakathi KukaKristu Weqiniso NoKristu Wamanga
Iqiniso Lokuba Sesimweni Somuntu
Indawo Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina
Ukwahlukanisa Phakathi Kokulandela UNkulunkulu Nokulandela Umuntu
Ukwenza Nokungena Eqinisweni
Isigcino Nesiphetho Somuntu
Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu useqalile kakade umsebenzi Wakhe omusha. Kungani abantu abangakwazi ukuhambisana nomsebenzi kaNkulunkulu omusha futhi behlala ebandleni leNkathi Yomusa bengeke bakwazi ukuthola insindiso?
Yize uJesu enza umsebenzi omningi kubantu, waqeda kuphela ukuhlengwa kwabantu waba umnikelo wezono zabantu, wangasisusa isimo senkohlakalo yomuntu. Ukusindisa umuntu ngokugcwele ekuthonyweni uSathane akudingi kuphela ukuthi uJesu athathe izono zabantu njengomnikelo wesono, kodwa kudinga ukuba noNkulunkulu enze umsebenzi omkhulu ukuze kuqedwe nya lesi simo somuntu, esiye sonakaliswa uSathane. Ngakho, ngemva kokuba umuntu ethethelelwe izono zakhe, uNkulunkulu wayesebuyele enyameni ukuze aholele abantu enkathini entsha, waqala umsebenzi wokujezisa nokwahlulela, kanti umsebenzi Wakhe usubeke abantu endaweni ephezulu. Bonke labo abathobela ukubuswa nguNkulunkulu bazothokozela iqiniso eliphezulu bathole nezibusiso ezinkulu. Bazophila ekukhanyeni, bazuze iqiniso, indlela, nokuphila.
Uma abantu begcina eNkathini Yomusa, kusho ukuthi ngeke bakhululeke esimweni sabo senkohlakalo, angiyiphathi eyokwazi isimo sikaNkulunkulu ngokwendalo Yakhe. Uma abantu benale nala yomusa kodwa bengenayo indlela yokuphila ebenza bazi uNkulunkulu futhi banelise uNkulunkulu, lokho kusho ukuthi ngeke bamzuze Yena yize bekholelwa Kuye. Lolo uhlobo lokukholwa oludabukisayo. Uma usuqedile ukufunda le ncwadi, uma usuzibonile zonke izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu osenyameni eNkathini Yombuso, uzozwa ukuthi amathemba eminyaka eminingi aseyabonakala. Uzozwa ukuthi kumanje kuphela lapho osubone khona uNkulunkulu ubuso nobuso; kumanje kuphela lapho ubheke khona ubuso bukaNkulunkulu, uzwe ukukhuluma kukaNkulunkulu, uthokozele ubuhlakani bomsebenzi kaNkulunkulu, uzwe ngempela ukuthi unguNkulunkulu oyiqiniso futhi umninimandla onke. Nizozwa ukuthi senizuze izinto eziningi abantu benkathi edlule abangazange bakubona noma baba nakho. Ngalesi sikhathi, nizokwazi kahle ukuthi kuyini ukukholelwa kuNkulunkulu, nokuthi kuyini ukufuna inhliziyo kaNkulunkulu. Yebo, uma ninamathela emibonweni yakudala, nichithe noma niphike iqiniso likaNkulunkulu wenyama wesibili, kusho ukuthi nizosala ningenalutho ningatholanga lutho, ekugcineni nibe necala lokuphikisa uNkulunkulu. Labo abahlonipha iqiniso bazithobe emsebenzini kaNkulunkulu bazongena ngaphansi kwegama likaNkulunkulu osenyameni okwesibili–uSomandla. Bazokwazi ukwamukela ukuholwa nguNkulunkulu, futhi bazothola okuningi neqiniso eliphakeme bathole nokuphila okuyiqiniso kwabantu.
Okubaluleke kakhulu ekulandeleni uNkulunkulu ukuthi konke kumele kuye ngokwamazwi kaNkulunkulu: Noma ngabe uphokophelela ukungena ekuphileni noma ukugcwalisa intando kaNkulunkulu, yonke into kumele igxile emazwini kaNkulunkulu. Uma lokhu okukhulumayo nalokhu okuphokophelelayo kungagxilile emazwini kaNkulunkulu, lokhu kusho ukuthi awuwazi amazwi kaNkulunkulu, futhi awuwazi umsebenzi kaMoya Ongcwele. UNkulunkulu ufuna abantu abalandela ezinyathelweni zaKhe. Noma ngabe kuhle futhi kumsulwa kangakanani obukuqonda ngaphambi kwalokhu, uNkulunkulu akakufuni, futhi uma ungakwazi ukuhlukana nezinto ezinjalo, zizoba isithiyo ekungeneni ekusaseni lakho. Babusisiwe bonke laba abakwazi ukulandela ukukhanya kwamanje kukaMoya Ongcwele. Abantu bezinkathi ezedlule nabo balandela ezinyathelweni zikaNkulunkulu, kodwa azange bakwazi ukulandela kuze kube namuhla; lesi isibusiso sabantu bezinsuku zokugcina. Labo abalandela umsebenzi wamanje kaMoya Ongcwele, nabakwazi ukulandela izinyathelo zikaNkulunkulu, ngendlela yokuthi balandela uNkulunkulu noma kuphi lapho ebaholela khona—laba abantu ababusisiwe nguNkulunkulu. Labo abangawulandeli umsebenzi wamanje kaMoya Ongcwele abakangeni emsebenzini wamazwi kaNkulunkulu, futhi noma bengasebenza kangakanani, noma bengahlupheka kangakanani, noma bengaba matasa kangakanani, konke lokho akusho lutho kuNkulunkulu, futhi ngeke abancome. Namuhla, bonke laba abalandela amazwi kaNkulunkulu basendleleni eyodwa noMoya Ongcwele; labo abangawazi amazwi kaNkulunkulu bangaphandle kwendlela kaMoya Ongcwele, kanti futhi abantu abanjalo uNkulunkulu akajabuli ngabo. Umsebenzi ohlukene namazwi kaMoya Ongcwele ngumsebenzi wenyama, wemiqondo, futhi awukwazi ukuhambisana nentando kaNkulunkulu. … Labo abasuswa ngomsebenzi kaMoya Ongcwele abantu abangakwazi ukulandela umsebenzi wakamuva kaNkulunkulu, abahlamuka umsebenzi wakamuva kaNkulunkulu. Ukuthi abantu abafana nalaba baphikisa uNkulunkulu ngokusobala kungenxa yokuthi umfanekiso kaNkulunkulu awufani nalona abazenzele wona emiqondweni yabo—ngenxa yokuthi baphikisa uNkulunkulu ngokusobala bahlulele uNkulunkulu, okuholela ekutheni uNkulunkulu abazonde futhi abachithe.
kwesithi “Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Bonke labo abasemgudwini kaMoya oNgcwele baphethwe ubukhona kanye nokuqondisa kukaMoya oNgcwele, futhi labo abangekho ngaphakathi komgudu kaMoya oNgcwele bangaphansi kokulawula kukaSathane, futhi abanawo umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu abasemgudwini kaMoya oNgcwele yilabo abamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, labo ababambisanayo emsebenzini kaNkulunkulu omusha. Uma labo abangaphakathi kwale ndlela behlukeka ukwenza iqiniso elidingwa uNkulunkulu ngalesi sikhathi, bazoqondiswa izigwegwe, futhi okubi kakhulu ukuthi bazolahlwa uMoya oNgcwele. Labo abamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, bazophila ngaphakathi komgudu kaMoya oNgcwele, bamukela ukunakekelwa nokuvikelwa uMoya oNgcwele. Labo abazimisele ngokwenza iqiniso bakhanyiselwa uMoya oNgcwele, futhi labo abangazimisele ngokwenza iqiniso bayaqondiswa uMoya oNgcwele, futhi bangaze bajeziswe. Ngisho noma umuntu unjani, kuncike ekutheni basemgudwini kaMoya oNgcwele, uNkulunkulu uzothwala ijoka labo bonke abamukela umsebenzi Wakhe omusha ngenxa yegama Lakhe. … Akunjalo kubantu abangawamukeli umsebenzi omusha: Bangaphandle komgudu koMoya oNgcwele, futhi ukuqondiswa kanye nokukhalinywa uMoya oNgcwele akusebenzi kubo. Usuku lonke, laba bantu baphila enyameni, baphila phakathi kwemiqondo yabo, futhi abakwenzayo nje kususelwa ezifundisweni ezivela ngokucubungula nocwaningo lwemiqondo yabo. Akukhona lokho okudingwa umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele, kube kungahambisani noNkulunkulu. Labo abangawamukeli umsebenzi kaNkulunkulu bancishiwe ubukhona bukaNkulunkulu, futhi, phezu kwalokho, bantula izibusiso nokuvikelwa uNkulunkulu. Amazwi abo amaningi kanye nezenzo kubamele ezidingweni zomsebenzi kaMoya oNgcwele; futhi kuyimfundiso, akulona iqiniso. Izimfundiso ezinje kanye nemithethonqubo kwanele ukuze kufakazele ukuthi into eyodwa ekuhlanganisayo yinkolo; akukhona okukhethiwe, noma injongo yomsebenzi kaNkulukulu. Ukuhlangana kwabo bonke labo abaphakathi kwabo kungabizwa ngokuthi ukuhlanganyela kwezenkolo kuphela, futhi kungebizwe ngokuthi ibandla. Lokhu kuyiqiniso elingaguquleki. Abanawo umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; abakwenzayo kubukeka kunephunga lenkolo, abakuphilayo kugcwele inkolo; abanabo ubukhona kanye nomsebenzi kaMoya oNgcwele, kanti abafanelekile nawukuqondiswa nokukhanyiswa uMoya oNgcwele. Laba bantu bayizidumbu ezingenampilo, futhi bayizimpethu ezingenamoya. Abanalwazi ngokuhlubuka nokuphikisa komuntu, abanalwazi ngezenzo ezimbi zonke zomuntu, bebe bengenalwazi nhlobo ngomsebenzi kaNkulunkulu kanye nentando kaNkulunkulu yamanje. Bonke abanalwazi, abantukazana, bawudoti ongafanele ukubizwa ngabantu abakholwayo! Akukho abakwenzayo okunegalelo ekuphatheni kukaNkulunkulu, kube kungelungise uhlelo lukaNkulunkulu. Amazwi abo kanye nezenzo kunyanyisa kakhulu, kuyadina, futhi akufanelekanga nawukuthi kuze kubalwe. Akukho okwenziwa yilabo abangekho emgudwini kaMoya ONgcwele abahlangene nomsebenzi omusha kaMoya oNgcwele. Ngenxa yalokhu, noma bengaba kuphi, abaqondiswanga uMoya oNgcwele, futhi, phezu kwakho konke, ngaphandle abakhanyiselwanga uMoya oNgcwele. Ngoba bonke bangabantu abangenalo uthando lweqiniso, futhi bayazondwa futhi bachithwe uMoya oNgcwele. Babizwa ngokuthi bangabenzi bobubi ngoba baphila enyameni, futhi benza noma yini ebathokozisayo ngaphansi kwegama likaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu esebenza, abazisondezi Kuye ngamabomu, futhi bagijimela kwelinye icala elingahambisani Naye. Ukwehluleka komuntu ukusebenzisana noNkulunkulu kuwukuhlubuka kuNkulunkulu okukhulu ngokwakho, ukungasho lutho ngokubaleka ngamabomu kwabantu kuNkulunkulu. Ngabe-ke, bazokuthola ukuphindiselwa ngokufanele? …
… Njengoba umuntu ekholwa kuNkulunkulu, kumele alandele eduze ezinyathelweni zikaNkulunkulu, isinyathelo nesinyathelo; kumele "alandele iMvana noma ngabe iya kuphi." Yilaba bantu kuphela abafuna indlela yeqiniso, yibo abazi umsebenzi kaMoya oNgcwele. Abantu ababhala izincwadi nezimfundiso yilabo abakhishiwe ngumsebenzi kaMoya oNgcwele. Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, futhi esikhathini ngasinye, kuzoba nesiqalo esisha kubantu. Uma umuntu elandela iqiniso lokuthi "uJehova nguNkulunkulu" futhi "uJesu nguKristu," okungamaqiniso asebenza kuphela enkathini eyodwa, umuntu-ke akasoze ahambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi uyohlala engakwazi ukuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele. Noma ngabe uNkulunkulu usebenza kanjani, umuntu ulandela ngaphandle kokungabaza, futhi ulandela eduze. Ngale ndlela, umuntu ubengasuswa kanjani uMoya ONgcwele? Noma ngabe wenzani uNkulunkulu, inqobo uma umuntu enesiqiniseko sokuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi ehambisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphandle kokunqikaza, futhi ezama ukuhlangabezana nezidingo zikaNkulunkulu, pho angajeziswa kanjani? Umsebenzi kaNkulunkulu awukaze ume, izinyathelo zakhe azikaze zime, futhi ngaphambi kokuqeda umsebenzi Wakhe wokuphatha, ubelokhu ematasa, futhi akami. Kodwa umuntu wehlukile: Njengoba ethole ingxenyana yomsebenzi kaMoya oNgcwele, uwuphatha sengathi awusoze waguquka; esethole ulwazi oluncane, akaqhubekeli phambili ukuze alandele ezinyathelweni zomsebenzi kaNkulunkulu omusha; esebone ingxenyana yomsebenzi kaNkulunkulu, ubheka uNkulunkulu ngokushesha njengesithombe esibazwe ngokhuni, futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uyohlala eyilesi simo asibona phambi kwakhe, ukuthi sasinje kudala futhi siyoba njalo nangesikhathi esizayo; esethole ulwazi olungatheni, umuntu uziqhenya kangangoba uyazikhohlwa futhi aqale ukumemezela ngesimo nobukhona bukaNkulunkulu okungekho nhlobo; futhi ebambelele esigabeni esisodwa sikaMoya oNgcwele, noma ngabe wuhlobo luni lomuntu olumemezela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, umuntu akawamukeli. Laba ngabantu abangeke bakwazi ukwamukela umsebenzi omusha kaMoya oNgcwele; futhi balukhuni; futhi abakwazi ukwamukela izinto ezintsha. Abantu balolo hlobo bakholwa kuNkulunkulu kodwa abamamukeli uNkulunkulu. Umuntu ukholwa ukuthi ama-Israyeli ayenephutha "ngokukholwa kuJehova bese engakholwa kuJesu," kodwa abantu abaningi babamba iqhaza kulokhu "ukukholwa kuJehova bachithe uJesu" futhi "balangazela ukubuya kukaMesiya, kodwa baphikisa uMesiya obizwa ngokuthi uJesu." Akumangazi-ke ukuthi abantu basaphila ngaphansi kukaSathane emuva kokwamukela isigaba esisodwa somsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi abakazitholi izibusiso zikaNkulunkulu. Lokhu akudalwa ukuhlubuka komuntu?… Yilabo kuphela abalandela ezinyathelweni zeMvana kuze kube sekugcineni abayokwazi ukuthola izibusiso zokugcina, kanti labo bantu “abahlakaniphile,” abangakwazi ukulandela kuze kube sekugcineni kepha bekholwa ukuthi bakuzuze konke, ngeke bakwazi ukubona ukuvela kukaNkulunkulu. Bonke bakholwa ukuthi bangabantu abakhaliphe kakhulu emhlabeni, futhi bayakunqamula ukuqhubeka kokuthuthukisa umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kwesizathu, futhi kubukeka sengathi bakholwa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uzobayisa ezulwini, lapho "abathembeke kuNkulunkulu kakhulu, abalandela uNkulunkulu, abalandela amazwi kaNkulunkulu." Noma "bethembeke ngokweqile" amazwini akhulunywe uNkulunkulu, amazwi abo nezenzo kusabonakala kunyanyisa kakhulu ngoba kuphikisana nomsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi benza inkohliso nobubi. Labo abangalandeli kuze kube sekugcineni, abasilelayo emsebenzini kaMoya oNgcwele, futhi ababambelela emsebenzini omdala abahlulekanga nje ukugcwalisa ukwethembeka kuNkulunkulu kuphela, kodwa, baphenduke labo abaphikisana noNkulunkulu, baba yilabo abachitha isikhathi esisha, futhi abazojeziswa. Ngabe bakhona abadabukisa ngaphezu kwabo?
kwesithi “Umsebenzi KaNkulunkulu Nokwenza Komuntu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okwedlule：Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ngimusha futhi ngisenokuningi kakhulu okufanele ngikwenze empilweni. Ingabe ngisengayithola insindiso uma ngilinda kuze kube yilapho sengimatasa kancane ukuze ngikholwe Kuye?
Kungani ukubuya kweNkosi ezinsukwini zokugcina kungabandakanyi ukubonakala kumuntu nokwenza umsebenzi Wakhe emzimbeni womoya?
Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: UNkulunkulu wezinsuku zokugcina usebenzisa izwi ukuphelelisa umuntu. Akasebenzisi izimpawu nezimangaliso ukucin…
Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Ngoba ngaphandle kokuqondisa kukaNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi ababusi nezazi zokuhlalisana kwabantu bazikha…
Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Abanye bakholwa ukuthi ngezinye izikhathi uNkulunkulu angeza emhlabeni ukuze abonakale kumuntu, lapho eyokwahlu…
Sixolelwe izono zethu futhi safaneleka ngokholo eNkosini, futhi ngaphezu kwalokho, sidele izinto eziningi, sazidela, futhi sayisebenzela ngokungakhathali iNkosi. Ngikholwa ukutheni lolu hlobo lokholo luzosivumela ukuba sihlwithwe siye embusweni wezulu. Kungani uthi lokhu ngeke kusenze sithole ukungena embusweni wezulu?
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Akubona bonke abathi kimi, Nkosi, Nkosi abazongena embusweni wezulu; kodwa lowo owenza intando kaBaba osezulwini. Aba…
Kungani isintu kufanele sikholwe kuNkulunkulu?
Kungani izwe limnyama futhi lilibi kangaka? Ngokuba kwesintu sezingeni eliphezulu lokukhohlakala, ingabe kufanele libhujiswe?
Abantu bavame ukuthi, “Ubuhle bunomvuzo wakho, ububi ukujeziswa kwakho,” khona-ke kungani uNkulunkulu engasusi bonke abantu ababi manje?
Abanye abantu bathi akekho nhlobo uNkulunkulu; kungani lo mbono uyiphutha? Singaqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu ukhona?
Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ngimusha futhi ngisenokuningi kakhulu okufanele ngikwenze empilweni. Ingabe ngisengayithola insindiso uma ngilinda kuze kube yilapho sengimatasa kancane ukuze ngikholwe Kuye?